Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Francesco Totti Nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
LB na-egosi Full story of a Roma Legend nke kacha mara aha na aha njirimara; “Gladiator".
Anyị Francesco Totti Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke AS Roma na Italian Football Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndabere ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ OFF-Pitch (amachaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ otu nwoke na-egwuri egwu maka Rom n'oge ọrụ ya niile. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle Francesco Totti's Bio nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Francesco Totti nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na Francesco Totti mụrụ na 27th ụbọchị Septemba 1976, na Rom, isi obodo Italy.
Francesco mụrụ nne ya, Fiorella Totti (onye na-elekọta ụlọ siri ike) na Nna Lorenzo Totti (onye bụbu odeakwụkwọ ụlọ akụ). Ndị nne na nna Totti sere n'okpuru ya na obere ya bụ ndị Italitali na okwukwe Roman Katọlik.
Totti toro na nwanne ya nwoke nke okenye bụ Riccardo Totti. A zụlitere ha abụọ n'obodo Porta Metronia nke obodo Rom.
Onyinye Ukwu ahụ: Totti mgbe ọ na-etolite, ọ dị mwute na ọ maghị nna nna ya n'ihi na ọ nwụrụ mgbe ọ bụ obere nwa.
Ma, nna ya ochie hapụrụ nnukwu onyinye. Onyinye ahụ bụ “Massive Roma Fan“. Gianluca Totti nyefere nna ya ịhụnanya wee nyefee ya Riccardo na ya.
Site n'oge ọ bụ nwata, Roma nọ n'ọbara na mkpụrụ obi nke obere Francesco Totti na ezinụlọ ya.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Totti ahụghị ọtụtụ egwuregwu Rom na telivishọn. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na egosighi ya na 80.
Oge kachasị obi ụtọ nke ezinụlọ Totti hụrụ mgbe nna ya zụtara tiketi ndị Rom. Nke a na-enye onye ọ bụla ohere ileta Stadio Olimpico.
Dị ka Totti na-etinye ya;
Anyị enwetaghị ọtụtụ egwuregwu na telivishọn n'ihi na ọbụlagodi na Rome, anaghị egosi ha mgbe niile na '80s.
Ma mgbe m dị afọ asaa, papa m nwetara tiketi. Enwere m ike imechi anya m ma cheta mmetụta ahụ.
Agba, ukwe, anwụrụ ọkụ na-apụ apụ.
Adị m nwatakịrị dị ndụ ma na-anọ n'ámá egwuregwu ahụ gburugburu ndị ọzọ ndị Rom na-agba ume ihe n'ime m.
Francesco Totti Biography - Ọrụ Buildup:
Ọbụna dịka nwatakịrị, football abụghị naanị ịhụnanya football maka Totti.
N'ime mgbidi ime ụlọ ya, Totti nwere akwụkwọ mmado na akwụkwọ akụkọ nke Gianni, onye bụbu onye isi Rom, na onye ndụmọdụ.
Dị nnọọ ka ọ dị na ọtụtụ egwuregwu bọọlụ, mmasị Totti nwere na bọl hụrụ ya ka ya na ụmụaka ndị ọzọ toro eto na-egwu bọl.
Ọ bụ na ezinụlọ ya na-egbochi nkà egwuregwu football ya. Totti gara n'ihu ịkwanye ikike ịgba bọọlụ ya site na Via Vetulonia, n'okporo ámá nke dị na ndịda Rome na basilicas.
Na-ezukọ: Otu ụbọchị, ezinụlọ Totti nọ na ezumike gaa obodo dị n'ụsọ oké osimiri nke Torvaianica, ihe dị ka ọkara elekere site na etiti Rome.
Lorenzo, papa ya, hụrụ otu obere ụmụaka dị afọ asatọ na-egwu bọl. Ọ gara n'ihu jụọ ha ma nwa ya nwoke ga-esonye n'egwuregwu ahụ.
"Ọ dị obere,"
ha kwuru, na-ekwusi ike na obere Totti onye dị afọ anọ nwere ike imerụ ya ahụ.
Mgbe ha kwenyesiri ike na Lorenzo, ụmụ nwoke ahụ kwetara na Totti na-egwu egwu.
Little Totti na-eyiri uwe na-acha uhie uhie na uwe elu ya na Ee e: 4 na azụ hapụrụ ndị egwuregwu niile n'ọhịa ka ọ gbagwojuru anya mgbe ngosi ya dị egwu.
N'ịbụ onye na-enweghị nguzogide site na nne na nna ya, ọ gara n'ihu na-asọpụrụ nkà ya na egwuregwu ahụ.
Francesco Totti Bio - Nchịkọta Ọrụ:
Dika nwatakiri nwoke nwere mmasi siri ike na football, Francesco Totti, mgbe o ruru asato ka nne na nna ya debanye aha ya na akwukwo ndi ntorobia nke obodo, Fortitudo Luditor, nke di na Rome.
Mgbe ọ gụsịrị ebe ahụ ruo otu afọ, ndị nne na nna Totti na 1984 malitere nyefe nwa ha nwoke Smit Trastevere ebe ọ na-egwuri egwu maka oge abụọ ọzọ.
N'ịbụ onye na-eto eto karịa ndị ntorobịa, Totti bịara bụrụ ndị a ma ama, ọbụnadị dike nwata ya, Giannini.
Ermenegildo Giannini, nna Giuseppe Giannini bụ onye na-ahụ maka ndị ntorobịa nke Rome n'oge ahụ.
Ọ nụworị banyere nwa na-acha odo odo, nke na-egbu egbu ma nwee ezigbo amamihe, ya mere o kpebiri ịga leta ndị otu ya ma lelee ya ka ọ na-egwu egwu.
Ná ngwụsị nke egwuregwu ọ na-ele, Ermenegildo Giannini bịakwutere Totti wee sị:
"I chetara m nwa m nwoke, ị ga - abụ onye mmeri dịka ya".
Mgbe ndụmọdụ sitere n'aka Ermenegildo, Totti kpebiri ịkwaga Lodigiani, ụlọ ọrụ ntorobịa ọzọ nke Rome na 1986.
Nkà ya na talent ya, yana ikike ya ime ihe banyere ọnọdụ, hụrụ ya ka ọ na-elebara ndị na-egwu egwuregwu si klọb kachasị elu na toptali niile anya.
Nnukwu Nkwụsị: N'afọ 1989, mgbe Totti dị afọ 13, kụrụ aka n'ọnụ ụzọ nke ezinụlọ ya na Rome. Nne Totti, Fiorella, gara ịza.
Ndị nọ n'akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ụzọ ahụ kwesịrị ịkọwa ọrụ egwuregwu football ya.
Mgbe Fiorella mepere ụzọ, otu ụmụ nwoke na-acha uhie uhie na ojii (nke na-anọchi anya AC Milan) gosipụtara onwe ha dị ka ndị ntụzịaka bọọlụ.
Ha chọrọ ka Totti bịa kpọọ otu egwuregwu ọ bụla. Dị ka Totti si kwuo;
Mama m tụdara aka ya mgbe ọ nụsịrị ndị ikom ahụ. Kedu ihe ị chere ọ gwara ụmụ nwoke ahụ?
Mgbe ị bụ nwa ewu na Rome, enwere naanị nhọrọ abụọ:
Are bụ ma ọbara ọbara ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ. AS Roma ma ọ bụ Lazio.
Mana n’ime ezi-na-ụlọ anyị, enwere nanị otu nhọrọ n’ime ọbara na mkpụrụ-obi anyị. Nke ahụ bụ Rome.
N'agbanyeghị nke ahụ, nsogbu ọzọ bịara mgbe ụlọ ọrụ ntorobịa ebe Totti na-egwuri egwu kwenyere ire ya na ndị ntorobịa nke Lazio, nke ka dị na Rome.
Ọ dabara nke ọma, Roma kpọrọ n'otu oge ahụ. Totti nakweere Roma, mechara bụrụ Giuseppe Giannini buuru ya ụzọ wee nọrọ na klọb maka afọ 24 sochirinụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Banyere Llary Blasi - Nwunye Francesco Totti:
Akụkọ na-adịghị ahụ n'anya: Ilary anaghị enye Totti ọtụtụ ohere ịmara ya wee chọta ụzọ ọ ga-esi dọta nwa agbọghọ ahụ.
Totti ji n'aka na o meriri ihe mgbaru ọsọ na Roma Vs Lazio derby. Mgbe ọ kwụsịrị, ọ gbagara na nsọtụ nke pitch iji gosi uwe elu ahụ "6 pụrụ iche!" nke Ilary nwekwara n'ebe ọ nọ. Site na itinye aka, ọ pụtara “Are pụrụ iche”.
Nke a mere ka Llary bụrụ onye mara mma ma mesịa kweta ịlụ ya.
Totti taa ji obi ụtọ lụọ nwunye ya, Llary Blasi bụ onye bụbu onye ngosi ihe nkiri TV. Ilary Blasi bụ onye showgirl nke bụbu onye so na-akwado Italia 1's show show Le Iene kemgbe 2007.
Di na nwunye ahụ gbanwere nkwa alụmdi na nwunye na 19th nke June, 2005 na Basilica nke Santa Maria na Aracoeli.
Emere agbamakwụkwọ ha na telivishọn site na onyinye ha nyere maka ọrụ ebere. Dị ka n'oge ederede, ụmụ ha atọ gọziri njikọ ha.
A mụrụ nwa mbụ nke Totti Cristian na 6th nke November 2005. Cristian bụ ihe kpatara ememme mkpịsị aka mkpịsị aka nke Totti nke bịara obere mgbe amụrụ ya.
Ndị enyi abụọ ahụ nwere nwa nwanyị mbụ ha bụ Chanel, a mụrụ na 13th nke May, 2007. Nwa ha nke atọ, a mụrụ Isabel na 10th nke March, 2016.
Ị maara??Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta Totti na ezinụlọ ezumike, mgbe ị kwesịrị ịga Sabaudia, nke dị na mpaghara Latina, 100 km si Rome.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ka ọ na-egwu mmiri ma ọ bụ na-ejide obere iyi n'akụkụ osimiri.
Mmekọrịta Francesco Totti nke gara aga:
Ruo mgbe ọ chọtara nwanyị nke ndụ ya, Francesco nọ na ọtụtụ ụdị. Na 1992, mgbe ọ dị afọ 15, Totti nwere ịhụnanya mbụ ya. Ọ malitere ịlụ Marzia Silvestri, onye na-egwu volleyball.
Na N'ajụjụ ọnụ Corriere Della Sera na 1996, Totti kwuru otu oge;
“Mụ na Marzia ga-alụ na '98, na ngwụsị nke nkwekọrịta m na Roma. Anyị anọkọla kemgbe afọ 4 na agbamakwụkwọ ahụ ga-abụ ohere ịhapụ ụlọ.
N'oge ahụ, achọghị m ịhapụ ezinụlọ m. Ndị enyi m na-agbanwe ụmụ agbọghọ ha n’ihi na ha nwere ohere ka ha hụ ndị ọhụụ.
Maka m, ọ dị iche, wee nwee ịhụnanya, gịnị kpatara m ga-eji gbanwee? Mụ na ya chọrọ ka m wulite ezinụlọ. ”
Nkwupụta a dị n'elu bụ naanị nro ka mmekọrịta ha kwụsịrị na June nke afọ na-esote.
Ruo mgbe ọ chọtara Llary Blasi na 2002, nwanyị nke ndụ ya, Francesco dere ihe ndị a mara mma bụ; Manuela Arcuri (2001), Maria Mazza (2000 - 2003) na Flavia Vento (2005).
Francesco Totti Biography - Iguzosi Ike n'Ihe Nye Rome:
Totti nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye Roma n'agbanyeghị inwe ọganihu site na nnukwu klọb, gụnyere Real Madrid, ịbịa kpọọ ha.
N'ikwu okwu banyere itinye oge ndụ ya niile na Rom, o kwuru otu oge;
“Ndị mmadụ na-ajụ m, gịnị kpatara ndụ gị niile na Rome?
Rome bụ ezinụlọ m, ndị enyi m, ndị m hụrụ n'anya. Rome bu oke osimiri, ugwu, ihe ncheta. Rome, n'ezie, bụ ndị Rom.
Rome bụ odo na-acha uhie uhie. Rome, m, bụ ụwa. Klọb a, obodo a abụwo ndụ m. ”
Tothụnanya Totti nwere maka Rome, yana Rome, ahụwo ya ka ọ mepụta njikọ nke karịrị football na n'ihi na a na-eme nke a dị ka dike nke mba nwere ọrụ nka na ebe a raara nye ya.
O doro anya na onye Italiantali na onye Rom na-ahụkarị n'anya n'etiti ndị agbụrụ n'ihi ihe nketa ya dị ka "otu nwoke".
Mgbe ọ lara ezumike nká, ụwa kpebiri inye ụtụ maka uwe elu ha 10 na onye isi Romanista. Anyị na-ewetara gị okwu mkparịta ụka zuru oke nke Totti. Lelee n'okpuru;
Francesco Totti Bio - Aha otutu:
Totti nwetara otutu aha ya site n'aka ndi ozo ndi kwadoro ụdị egwuregwu ya nakwa nke football ya.
Aha aha Il Gladiatore (Gladiator) biara n'ihi mmesi obi ike ya na mmeri ya. A na-ahụ nke a na egbu egbu ya dị n'okpuru ebe a.
Inwe Gladiator na ogwe aka ya bụ egbugbu mbụ nke Francesco. Ọnwụ a bịara site na nzọ ọ so enyi ya bụ Claudio Amendola nwee.
Ha abụọ kwenyere na mgbe Rome meriri Scudetto, ha ga-egbu egbugbu gladiator n'aka nri ha.
Bọchị na-esote mmeri ahụ, ha abụọ gara ụlọ ọrụ nke Gabriele Donnini, onye omenkà ama ama ama ama n'obodo ahụ. N'okpuru ebe a bụ foto nke Totti na-edozi Tattoo mbụ ya.
A na-ewere Totti ka ọ bụ "Eze Rom nke a na-atụghị anya ya". A na-egosipụta nke a na foto dị n'okpuru ebe a.
Aha aha ọzọ Er Bimbo de Oro (Nwa Ọchịchị ahụ) e nyere ya n'ihi na ọ bụ onye egwuregwu a kachasị amara na Rom.
Totti nwetara aha aha 'Er nwa' (na nsụgharị na-enweghị atụ pụtara Bebezão). Aha a sitere n'oge nwata ya mgbe Totti dị obere karịa ndị otu. Aha na Bekee pụtara "Big Baby"
N'ikpeazụ, na nicknames, a kpọrọ Totti- Ọ Capitano (The Captain) site na ndị Fans maka ịbụ onye ndú nke ụlọ ọgbakọ ruo ọtụtụ afọ.
Ndụ ezinụlọ Francesco Totti:
More banyere ezinụlọ Totti: Ọ na-akpọkarị mama ya “mamma mia ”. N'ịkọwa mama ya, Totti kwuru otu oge;
My Mamma bụ onyeisi. Ọ bụ ya bụ onyeisi. Ọ na-adọrọ mmasị ụmụ ya, ka anyị kwuo.
Dị ka nne ọ bụla Italiantali, ọ bụ onye na-enweghị nchebe.
Ọ chọghị ka m hapụ ụlọ ka ụjọ ghara inwe ihe nwere ike ime.
Mama Totti kụziiri nwa ya ihe. Na ụlọ ya bụ ihe kachasị mkpa na ndụ. N'oge ahụ, Fiorella Totti bụ onye kpaliri nwa ya nwoke ime ihe.
N'èzí ala, ọ ga-echere ya. Ọ nwere ike ichere maka abụọ, atọ, mgbe ụfọdụ elekere anọ ka Totti ga-azụ. Fiorella ga-eche na mmiri ozuzo, na oyi, ọ dịghị mkpa.
Nwanna: You maara ?? .. E mesiri ike na Riccardo mgbe ọ na-ekwu okwu banyere football na ezinụlọ Totti. Riccardo, nwa nwoke nke okenye, na nwanne nwanne Totti na-egwuri egwu.
Nna ha, Enzo, etinyeghị uche dị ukwuu na obere Francesco onye dị afọ isii karịa nwanne ya nwoke.
Riccardo bịara igwu egwu na ngalaba ndị Rom ma nwanne ya nwoke, Francesco kpuchiri ya. Taa, ọ bụ ugbu a oche ASD Totti bọọlụ nke Francesco nwanne ya nwoke nwere.
Francesco Totti Ndụ Nke Onwe:
Mgbe Totti meriri onyinye Onyinye mbu: Na Rome, n'oge mmalite nke Totti. Omenala pụrụ iche dị mgbe niile na 5 na 6th nke Jenụwarị.
Otu agadi nwanyị aha ya bụ Befana (nke a na-agbanwe agbanwe nke Santa) na-agafe n'ụlọ niile wee hapụ swiiti na onyinye ndị ọzọ maka ụmụaka ndị na-eme omume ọma ma ọ bụ iberibe icheku ọkụ maka ndị na-eme ihe ọjọọ.
Na 3 afọ, obere Totti meriri onyinye Befana mbụ ya: bọl bọl. Ya na ya dinara kwa abali.
Maka otutu ụmụ, nke a bụ otú ọ dị ka ịhụ na ijide Totti maka oge mbụ.
Ọchịchọ Totti nwere maka swiiti na ice cream na ịhụnanya pụrụ iche maka puppy Labrador. O nwere nkịta 6 dị ka n'oge ederede.
Francesco kpebiri inye ndị nkịta ya abụọ otu ụlọ akwụkwọ nnapụta ka a zụọ ha otu esi enyere ndị nọ na nsogbu aka n'oké osimiri.
Nkịta ya Ariel zọpụtara mmadụ abụọ, nwanyị nke 60 afọ na nwa agbọghọ nke 8 afọ, n'ụsọ osimiri Sant'Agostino.
Otu AS Roma Fan na-asọpụrụ onye nchịkwa akụkọ bụ Francesco Totti na Tattoo dị mma. Hụ okpuru!!
Maka Totti: Oge ahụ mgbe ị ghọtara na ị ga-anọ n'ahụ nwoke a ruo mgbe ebighi ebi !!
Otu nrọ nke Francesco Totti bụ ndị a: Buffon, Maicon, Candela, Samuel, de Rossi, Xavi, Iniesta, Totti, Cristiano Ronaldo, Messi na Ibrahimovic.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Totti ahọrọghị onye nchịkwa iji mechie ndepụta ahụ. Totti na-ewere Gianluigi Buffon dị ka otu n'ime ezigbo ezigbo ndị enyi ọ na-egwuri egwu na football. Ha abụọ zutere n'oge ha n'okpuru 15.
Ndị enyi ndị ya na ya na-akpakọrịta bụ Alessandro Nesta, Vincent Candela, Cristian Panucci, Vincenzo Montella, Gennaro Gattuso na Alessandro Del Piero onye ọ na-agbanwe ozi ya mgbe ọ bụla ọ na-agbaso ọgba aghara ochie na pitch.
Na 2004, a na-akpọ Totti na FIFA 100, ndepụta nke egwuregwu kachasị egwu n'ụwa, họrọ Pelé, dị ka akụkụ nke ememme centenary nke FIFA.
Dị ka ọ dị n'oge ederede, ọ na-edekọ akụkọ dịka onye mgbaru ọsọ kasị ochie na UEFA Champions League, afọ 38 na 59 ụbọchị.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Francesco Totti Childhoodmụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, Anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Eze Rom a na-atụghị anya ya
Bọchị gbanwee: Eprel 18, 2021
Bọchị gbanwee: Mee 17, 2021